February « 2012 « lunnsetnoemyat
ခရစ္စမတ်ကဒ်လေးပေါ်မှ အိပ်မက်သည် အရွယ်ရောက်စလိပ်ပြာတစ်ကောင်လို တောင်ပံတစ်ဖျပ်ဖျပ်လှုပ်ခတ်နေသည်။ ဖြည်း ညင်းစွာ မှုတ်ထုတ်လိုက်သော ပင့်သက်တစ်ရှိုက်ထဲတွင် နာကျင်မှုတို့ အခိုင်လိုက် ပြွတ်သီးနေသည်ဟု အောက်မေ့မိ၏။ အမှောင်လာပြီလား၊ သူမ၏ မျက်ဝန်းထောင့်ဆီမှ အပြာနုရောင်အလင်းတန်းတစ်ချက်ကို သတိထားလိုက်မိသည်။ နာကျင်မှုတို့က နာကျင်သထက် နာကျင်လာသလို ခံစားရပြန်လေသည်။
တကယ်ဆိုလျှင် အမှောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလင်းပဲဖြစ်ဖြစ် လောကတွင် အရာအားလုံးသည် သူ့နေရာနှင့်သူ ရှိနေပြီးသားဖြစ်သည်။ ဟောင်းမြေ့နေသည့် ဓာတ်ပုံထဲတွင် သူမမျက်နှာ၏ အရိပ် ကျသောနေရာများတွင် အမှောင်သည် နေရာကျစွာ သေ၀ပ်နေသည်။ နံရံပေါ်က ပန်းချီကားထဲမှာ အဲဒီအလင်းရောင်တွေ ဘယ်သူထည့်ဆွဲသွားတာလဲ။ သူကတော့ အမှောင်နှင့်အလင်း ပျော်ဝင်မျှတနေသော နံနက်ခင်းတချို့ကိုသာ အလိုရှိခဲ့သည်။
ဤကမ္ဘာ၏ နံနက်ခင်းတစ်ခုသည် နှင်းစက်ဖြူတို့ဖြင့် အေးစက်ထုံကျင်နေလိမ့်မည်။ (ထိုအခါ ကလေးငယ်တစ်ယောက်က ထို နံနက်ခင်းအား ရေခဲမုန့်တစ်ခုလို အငမ်းမရ ၀ါးစားပစ်နိုင်သည်။)
ဤကမ္ဘာ၏ နံနက်ခင်းတစ်ခုသည် ကောင်းကင်မှ ရွှေရောင်ငွေရောင် စက္ကူမျှင်စများ ကြဲဖြန့်ကျရောက်လာခြင်းကို တအံ့တသြ ကြုံတွေ့နေရလိမ့်မည်။ (ထိုအခါ ထိုမြို့မှ အဆိုတော်များ သည် လမ်းမများပေါ်တွင် အမ်မ်တီဗွီရိုက်ကာ စုံတွဲများက ပန်းခြံထဲ၌ လက်ချင်းချိတ် ရင်း လမ်းလျှောက်နေနိုင်သည်။)
ဤကမ္ဘာ၏ နံနက်ခင်းတစ်ခုသည် နှင်းစက်ဖြူ၊ ရေခဲမုန့်၊ ယမ်းငွေ့မီးခိုး ၊ လင်းချင်းချိတ်၊ အဆိုတော်၊ ကြောင်စီစီ၊ ပန်းခြံ၊ အမ်တီဗွီ ။ထားလိုက်ပါတော့။ ဘယ်လိုနံနက်ခင်း မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
သူထိုင်နေကျ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့က နံနက်ခင်းကတော့ ခါတိုင်းလိုပင် မထုံတက်တေးအသွင်အပြင်နှင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ရှေ့ မှ ဖြတ်သန်းသွားမည့် မျက်ဝန်းပြာပြာနှင့် ကောင်မ လေးတစ်ယောက်ကို သူစောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်၏။
သည်နေ့သည် ခရစ္စမတ်နေ့ဖြစ်ကာ ကောင်မလေးကို လက်ဆောင်ပေးရန် ၀ယ်လာခဲ့သော ခရစ္စမတ်ကဒ်လေးအား သူ့လက်ဖျား များဖြင့် မကြာခဏပွတ်သပ်နေဖြစ်သည်။
မျက်ဝန်းပြာမလေးသည် သူထိုင်နေကျ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် နောက်ဖက်ရှိ ရပ်ကွက်ထဲတွင် နေထိုင်သည်။ ကောင်မလေး၏ ကျောင်းအသွားအပြန် နံနက်ခင်းများနှင့် ညနေခင်းများအား သူက ဤလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှ လာရောက်၍ ငေးရီစောင့်မျှော်နေကျဖြစ်၏။
ကောင်မလေး၏ နာမည်သည် သူ့အတွက် အရေးမကြီးလှသော်လည်း လိုအပ်သည်ဟု ယူဆ၍ ကောင်မလေးနှင့် တစ်လမ်းထဲနေ သည့် သူ့သူငယ်ချင်းအား ဤလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ခေါ်ယူကာ ကောင်မလေး အကြောင်းကို သူအတော်များများ စုံစမ်းခဲ့သည်။
ကောင်မလေး၏နာမည်သည် ထိပ်ထားရွှေစင်လား၊ ကလျာသီရိစန္ဒာလား၊ အိနြေ္ဒစိမ့်သက်သက်ခိုင်လား ဒါမှမဟုတ် ဂျိန်းဖောင်ဒါ လား၊ ဘရွတ်စ်ရှီးလား၊ ဒယ်မီမိုးလားလို့ ကောင်မ လေးကို တွေ့စတုန်းက သူစဉ်းစားမိခဲ့ဖူးသော်လည်း ကောင်မလေးနာမည်သည် “၀င်းဝင်းမော်”ဟု သိလိုက်ရသောအခါ သူက ထိုနာမည်လေးကိုရော ကောင်မလေးကိုပါ ချစ်မိပြီးသား ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးပြီ။ တစ်ချို့ကိစ္စရပ်များ သည် ထူးခြားမည်ထင်ထားသော်လည်း ထူးခြားမလာသည့်အတွက် သူဘာမှ မတတ်နိုင်ပါ။
နာမည်ဆိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က တစ်စုံတစ်ယောက်အား ခေါ်ဆိုဖို့၊ အတင်းအဖျင်းပြောဖို့၊ မြှောက်စားဖို့၊ စော်ကားဖို့၊ ဖော်လံဖားလုပ်ဖို့၊ ရန်စဖို့၊ နှိမ်ချဖို့၊ အချိုသတ်ဖို့စသည် ကိစ္စရပ်များ သက်သက်အတွက် မှည့်ဆိုထားကြခြင်းမဟုတ်နိုင်ပါ။ သူက ကောင်မလေး ကို ကောင်မလေးဟုသာ ခေါ်ဆိုချင်ပါသည်။
သူဖြတ်နင်းလျှောက်လာခဲ့သည့် မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလွင်ပြင်အား နီးကပ်စွာ ကြည့်မိရာ နှင်းစက်မှုန်တို့ဖြင့် စိုလူးနေသော မြက်ပင် ရွက်ဖျားများကို မြင်ရသည်။ ခပ်ဝေးဝေးမှ မြွေတစ် ကောင်လို တွန့်ခွေနေသည့် မြေနီလမ်းကလေးသည်လည်းကောင်း၊ ကြည်စင်နေသော ကောင်းကင်ထဲ တိုးသက်စီးဝင်သွားကြသည့် အညိုဖျော့ဖျော့မီးခိုးများသည်လည်းကောင်း၊ ထိုမီးခိုးများအား မှုတ်ထုတ်လိုက်သော နီညိုရောင် ခေါင်းတိုင်နှင့် အုတ်တိုက်ပုပုလေးများသည်လည်းကောင်း၊ သူ့အတွက် ခံစားချက်တစ်စုံတစ်ခု မပေးစွမ်းနိုင်သည်မှာ သေချာလွန်း နေသည်။
““ဟိုကောင်မလေး၊ ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲ၊ ကျောင်းမသွားသေးဘူးလား
ခြံထဲရောက်ရောက်ခ်ျး အလှစိုက်ပန်းအိုးများဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေသည့်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့၍ မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးသည် သူ့သမီးငယ်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်တက်နေသူလည်း ဖြစ်သည်။ သူ့သမီးက…
““သမီး… ဒီနေ့နေ့လည် ညိုမာတို့ တင်မြင့်အောင်တို့နဲ့ သမ္မတရုံမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ ချိန်းထားတယ် ဖေဖေ။ ကျောင်းမှာလည်း ဒီနေ့ Class မရှိဘူး””
““အေးကွယ်.. ဒါဆိုရင်လည်း အိမ်အပြန်တော့ သိပ် နောက်မကျ နဲ့နော် သမီး””
သူ့စကားကြောင့် သူ့သမီးနှုတ်ခမ်းတစ်ဖက်မဲ့ကာ မျက်နှာအောက်ငုံ့သွားသည်။ သူ့သမီးဆီမှ ထိုကဲ့သို့သော အမူအရာများအား မြင်တွေ့ဖူးဖန်များသောကြောင့် သူမည်သို့မျှ ထိထိခိုက် ခိုက်မခံစားရ။ ယခင်သည်လိုအချိန် သူမနက်ခင်းလမ်းလျှောက်ထွက်ရာမှ ပြန်လာလျှင် သူ့သမီးက ကျောင်းအကြိုအပို့ ဖယ်ရီကားပေါ်ရောက်နေပြီ။ ဒီနေ့တော့ “အင်း… စောစောပြန် လာခဲ့သာ မှာရတယ်၊ သမီးက ဖအေပြောတာ ဆိုရင် သိပ်အလေးအနက်ထားချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ အင်းလေ.. ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့။ “သိပ်အရေးမကြီးပါဘူး”ဟု သူ့နှုတ်ခမ်းမှ ခပ် တိုးတိုးရေရွတ်ရင်း အိမ်ထဲလှမ်းဝင်လိုက်သည်။
(ကိုသိန်းဖေ၊ ကျွန်မဆိုင်သွားပြီ၊ မိသက်တို့သားအမိလည်း သူတို့ အဒေါ်နဲ့ မနက်ကပဲ ကျိုက်ထီးရိုးသွားကြတယ်။ ရှင်လိုအပ်တာ ရှိရင်လည်း ထုံးစံအတိုင်း ထွေးလေးကိုပဲ ခိုင်းပါ။)
ဧည့်ခန်းထဲမှWhite Board ကိုကြည့်ပြီး မိန်းမဖြစ်သူနှင့် စကားမပြောဖြစ်တာ သုံးလလောက်တော့ ရှိပြီလို့ တွေးမိတော့ သူယဲ့ယဲ့ကလေး တောင်ပြုံးမိလိုက်သေးသည်။ တကယ်တော့ တမင်တကာ စကားမပြောဘဲ နေကြတာတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အယူအဆမတူညီ သူနှစ်ယောက်အဖို့ ရန်စကားတွေ ပြောနေကြမည့်အစား အတတ်နိုင်ဆုံး နှုတ်ဆိတ်နေကြရာမှ ယခုလို စကားမပြောဖြစ်ကြတာပဲဖြစ်မည်ဟု သူထင်သည်။ ထားနေကျအတိုင်း နံရံတစ်နေရာတွင် လမ်းလျှောက်တုတ်ကောက်လေးအား မှီထောင်ထားလိုက်ကာ အိစက်နေသော ဆိုဖာဆက်တီပေါ်သို့ သူခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချလိုက်သည်။
ဒီတစ်လ ထီဖွင့်ဖို့ ဘယ်နှစ်ရက်လိုသေးသလဲ။ အရေးမကြီးပါဘူး။ မြင်ရကြားရသမျှကလည်း မိုးပေါ်က မဆင်းတော့ဘူး။ အရေးမကြီးပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ကျဉ်းလာ တယ်ဆိုရင် ကြပ်လည်းကြပ်လာမှာပေါ့။ အရေးမကြီးပါဘူး။ နယ်က သော့ခတ်ထားခဲ့တဲ့ ကိုယ့်တိုက်ခန်းပေါ် သူခိုးတက်လို့တဲ့။ အရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးမကြီးပါဘူး။ သူ့အတွက်က ပစ်စလတ်ခတ်ပိုလျှံနေသော အချိန်ကာလများ အား အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ကုန်ဆုံးသွားရန်သာ အရေးကြီးသည်။ ဟင့်အင်း… အဓိပ္ပာယ်ရှိဖို့ဆိုတာတောင် အရေးမကြီးတော့ပါဘူးလေ။ အရေး မကြီးသော အတွေးတွေထဲတွင် လွင့်မျောနေရာမှ အသိတစ်ခုက ခန္ဓာကိုယ်ကို လာကပ်သည်။ သူ့ချွေးမ မိသက်တို့ သားအမိတောင် နယ်ကလာတဲ့ ဧည့်သည်နဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူး သွားကြတယ်ဆိုပဲ။ အဲဒါကြောင့် စောစောက အိမ်ထဲအ၀င်မှာ တစ်ခုခုလိုနေသလို ခံစားရတာကိုး။
လေအလှုပ်မှ ယိမ်းရွေ့သွားသော သစ်ရွက်ခတ်သံသဲ့သဲ့အား ကြားရ၏။ ကောင်းကင်မျက်တောင်ဖျားမှာ တိမ်ဖြူတို့ ၀ဲရှပ်လွင့်ပါး နေကြသည်။ အနောက်အရပ်ဆီ ပျံသန်းသွားကြသော ငှက်တစ်အုပ်ကို မြင်နေရသည်။ ဝေးလွန်းသည့်အတွက်ကြောင့် အပြာရောင်ထဲတွင် အမည်းစက်ကလေးများ ညင်သာရွေ့လျားသွားသည့် အသွင်ဖြစ်နေသည်။ သူတို့လည်း ကိုယ့် အဖော်ကိုယ်စီနှင့် ပျော်ရွှင်နေကြပေမည်။ ကောင်းပါသည်။ နားခိုနေရာတာထက် လှုပ်ရှားဆူဝေနေရတာက ဘ၀ပိုဆန်ပါလိမ့်မည်။ ခပ်ညံ့ညံ့လူများ ပြောလေ့ပြောထရှိသော “ဘ၀ဆို တာ တိုက်ပွဲ”ဟူသည့် စကားနှင့် အဓိပ္ပာယ်ခြင်း ဆင်ကောင်းဆင်နေနိုင်သည်။ ဒီလိုပါပဲ။ သူတို့အားလုံး ကြားဖူးနားဝတွေဖြင့် မိုးချုပ်နေခဲ့တာ ကြာပြီ။
ယခုလည်း သူနှင့် သူ့ချစ်သူကောင်မလေး (မျက်ဝန်းပြာမလေး) တို့သည် သမီးရည်းစားတို့လမ်းစဉ်အတိုင်း ပန်းခြံထဲမှာ ချိန်းတွေ့ ရမည် ဟူသည့် ကြောင်တောင်တောင် ကြားဖူးနားဝ အစဉ်အလာကို လိုက်နာသောအားဖြင့် ရေကန်ကြီးကြီးရှိသော ပန်းခြံတစ်ခုထဲတွင် လာရောက်တွေ့ဆုံကြခြင်းဖြစ်သည်။
““မောင်…. ကန်ကြီးက သိပ်လှတာပဲနော်””
သူကတော့ ဖြစ်နိုင်လျှင် ပန်းခြံထဲမှာ သမီးရည်းစားချိန်း မတွေ့ချင်ပါ။ ရုပ်ရှင်ရုံသွား၍လည်း အတူတူမကြည့်ချင်ပါ။ (ထို ရုပ်ရှင်က ကုလားကားဖြစ်နေလျှင် ပိုပြီး စိတ်ရှည်နေရဦးမည်။) နီးစပ်ရာ ဘောလုံးကွင်းတစ်ခုထဲသို့သာ နှစ်ယောက်အတူ သွားနေလိုပါသည်။ (ထိုနေ့ တွင် မည်သည့်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှ ရှိမနေစေနဲ့ပေါ့။)
““နေဦး… မောင်၊ ဟိုးက အပင်မြင့်ကြီးပေါ်မှာ နားနေတာ ဘာငှက်လဲဟင်””
အဆိုပါ ဘောလုံးကွင်းထဲသို့ ဆေးရောင်ခြယ် ကာတွန်းစာအုပ်တစ်အုပ်-နှစ်အုပ်နှင့် ရောင်စုံခဲတံတစ်ဗူးလည်း ယူလာရပါလိမ့် မည်။ ပျင်းလျှင် ကွင်းထဲဆင်း၍ ဘောလုံးကန်ရန် ဘောလုံးတစ်လုံးလည်း ယူလာရပါလိမ့်မည်။ ဘောလုံးကွင်းသည် ပန်းခြံထက် မျက်စိ နောက်နိုင်စရာ မရှိနိုင်ပါ။ (ပန်းပွင့်လေးများ၏ ရနံ့ကို ရူရိုက်နိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးသွားသော်လည်း ချစ်သူရနံ့ဝင်သက်ထွက်သက်ဖြင့် နွမ်းသောရင်အား ဖြေလျော့ဝပ်ဆင်းပါမည်။) ပြီးတော့ ဘောလုံးကွင်းသည် ပန်းခြံလိုပဲ လေကောင်းလေသန့် အပြည့်အ၀ရနိုင်သည့် နေရာလည်းဖြစ် သည်။ မကောင်းဘူးလား။
““မောင်…ကြည့်၊ မေးနေတာကြာပြီ မဖြေဘူး။ ဘာလဲ မောင်က မော့်ကို ဘေးနားထားပြီး တစ်ခြားကောင်မလေးတစ်ယောက် အကြောင်း စဉ်းစားနေတာလား””
မျက်ဝန်းပြာမလေးက ပြောပြောဆိုဆို သူမပခုံးသားနုနုကလေးဖြင့် ခပ်သာသာတိုက်လိုက်သောကြောင့် သူလန့်သလို ဖြစ်သွား ကာ ဘောလုံးကွင်းလည်း စိတ်ကူးထဲမှ ပျောက်သွား၏။
““ဟာ၊ ဟင့်အင်း… မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ မောင်က လာမယ့် စနေနေ့မှာ မောင်တို့ ဘာအစီအစဉ်နဲ့ လှုပ်ရှားရင် ကောင်းမလဲလို့ စဉ်း စားနေတာ””
ကောင်မလေးကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေး သူလိမ်ညာလိုက်သည်။ ငါတွေးတာတွေမှ သူသိမှ မသိဘဲ။ ဗြောင်လိမ်တာလို့တော့ ဘယ်ပြောရပါ့မလဲဟု သူထပ်တွေးမိပြန်သည်။ ခဏကြာ တော့ ကောင်မလေး သူ့အပေါ် စိတ်ပြန်ကြည်လာကာ သူမ၏ ဆွေမျိုးအသိုက် အ၀န်းများအကြောင်းတွေအား ပြောပြနေပြန်သည်။ ကောင်မလေးပျော်နေရင် ပြီးတာပါပဲ ဟူသည့် သဘောလည်း ကျရောက်ကာ သူ့ထံတွင် ထိုအခိုက်တန့်မှာ လုပ်ကိုင်စရာ ကိစ္စကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အဆင်သင့်ရှိမနေခြင်းကြောင့် သူမပြောသမျှကို ဂရုတစိုက် သူနားထောင်ပေးနေ လိုက်သည်။
ကန်ရေပြင်ကို လှုပ်ရှားလှိုင်းထစေသော လှေငယ်တစ်ချို့ပေါ်တွင် စုံတွဲတစ်ချို့ ရှိနေသည်။ ကြည်နူးမှုတစ်ချို့လည်း ရှိနေလိမ့် မည်။ ထိုကြည်နူးမှုတို့သည် နှစ်ယောက်ထိုင်ခုံလေး ပေါ်တွင်လည်း ရှိနေသည်။ တချို့ကြည်နူးမှုများကတော့ ဟောဟိုက စားသောက်ဆိုင် ထဲမှာ စကားစမြည်ပြောနေကြသည်။ သို့သော် ကြည်နူးမှုသည် ခါးသီးသောရမ္မက်အသွင်ပြောင်း ၍ ၀ါးရုံပင် ခြုံကွယ်များနောက်တွင်လည်း ရှိ နေကြ၏။
ကောင်မလေးနှင့် တစ်လမ်းထဲနေသည့် သူ့သူငယ်ချင်း၏ အကူအညီဖြင့် (အတိုချုပ်ပြောရလျှင်) ကောင်မလေးနှင့်သူ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ သည်ကာလကြားထဲ ယောက်ျားပျိုတစ် ယောက်က မိန်းမပျိုတစ်ယောက်၏ အချစ်အတွက် ထိုက်သင့်သလောက်ပေးဆပ်မှုများဖြစ် သည့် အချိန်ကာလ၊ ဘာနေ့ညာနေ့အမှတ်တရလက်ဆောင်၊ အားနာစိတ်ပျက်မှု၊ ကိုယ်နှင့် ရည်းစားလုဖော်လုဖက်၊ မျိုးရိုးနှင့်ပညာအရည်အချင်း။ နောက်… ငွေ (သို့မဟုတ်) ရေ (သို့မဟုတ်) အာရကေ (သို့မဟုတ်) သြညနပ မန်းနီး စသဖြင့်ပေါ့… သမာရိုးကျဆန်ဆန် မိုက်မဲမှု တွေပေါ် ရင်ခုန်နားခိုခဲ့သော အ၀ါရောင် မပီမသနေ့ရက်တွေလေ။ အခုထိ လတ်ဆတ်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတုန်း….
အိမ်အပြင်ဘက် ခြံဝန်းဆီမှ အမျိုးအမည်မသိ ငှက်တစ်ကောင် အော်မြည်နေသံကို ခြောက်ကပ်စွာ ကြားနေရသည်။ နေ့လည်ခင်း သည် ပွင့်ဖတ်တစ်ဝက်တစ်ပျက် ကြွေကျနေသည့် ရိုးတံငေါငေါ နှင်းဆီကိုင်းခြောက်တစ်ခုလို စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလွန်းနေသည်။ ဘာကြီးလဲ… ဘာလိုအပ်နေတာလဲ …လက်ထဲမှ ဇွန်းနှင့်ခက်ရင်းကိုချကာ အနီးက ဖန်ခွက်ထဲရှိရေကို သူ ကောက်မော့လိုက်သည်။
သူနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အသက် (၁၀) နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက် ထမင်းထိုင်စားနေသည်။ စားနေရင်းမှ သူ့ဘယ် ဘက်ရှိ အသက် (၃၀) ခန့်လောက် မျက်နှာထားတည် တည်နှင့် အမျိုးသမီးထံ လှမ်းပြီး စကားပြောနေသည်။ ထိုအမျိုးသမီး၏ ဘေးတွင် ပါးစပ်မှာ ဟင်းဖတ်များပေကျံနေသောအသက် (၃) နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက် ထမင်း ထိုင်စားနေသည်။ သူတို့ပြောနေကြသော စကားများကိုတော့ သူမကြားရပါ။ သည်အဖြစ်အပျက်တွေက ဟိုအရင် (၁၆) နှစ်အလွန်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။
ထမင်းစာခန်းသည် ရှိရင်းစွဲအခြေအနေထက် ပိုမိုတိတ်ဆိတ်သွားသလို ခံစားရသည်။ စောစောက သူကောက်မော့လိုက်သည့် ရေတွေလည်း လည်ချောင်းထဲမှာပင် ခြောက်ကပ်သွားပုံရ ၏။ ရင်ဘတ်ထဲထိမရောက်၊ ယခင်ရက်တွေတုန်းကလို သူ့ချွေးမမိသက်တို့ သားအမိ မရှိတာလည်း ပါမည်။ သူ့ချစ်မြေးဖိုးဇော်က အလွန်အဆော့သန်တဲ့ကောင်။ ဒီကလေးတောင် ရှေ့လဆို (၅) နှစ်ပြည့်ပြီ၊ ရှိပြီပေါ့လေ။ သူအဖေ ဇေယျာလတ်တောင် (သူ၏သားအကြီးဆုံး) ဘာလိုလိုနဲ့ မလေးရှားသွားတာ (၃) နှစ်ရှိပြီပဲ။
အေးခဲစပြုနေသော အတွေးအိုတို့ဖြင့် ထမင်းစားစားပွဲမှ မထဘဲ သူငိုင်နေဖြစ်သည်။ နေ့လည်ခင်းသည် တံလျှပ်ထနေသည့် ကန္တာ ရလွင်ပြင်တစ်ခုဆန်ဆန် တိတ်ဆိတ်ဆဲ…။
““ဘဘကြီး၊ ပန်းကန်တွေ သိမ်းလိုက်ရတော့မလား””
အသံတစ်ခုကြောင့် သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ခနဲဖြစ်သွား၏။ အိမ်မှာ အ၀တ်လျှော်ထမင်းချက်ရန် သူ့မိန်းမ နယ်မှခေါ်ထားသော ထွေးလေး၏ အသံဖြစ်နေသည်။ ထွေးလေးကို သူခေါင်း တစ်ချက် ညိတ်ပြလိုက်သည်။
““ဘဘကြီး ဒီနေ့ထမင်းသိပ်မစားဘူးနော်၊ မမလေး နှင်းချိုလတ်လည်း စားမသွားဘူး၊ ရုပ်ရှင်ရုံရောက်မှပဲ တစ်ခုခုဝယ်စားတော့ မယ်တဲ့…။””
ပထမတော့ ဧည့်ခန်းဘက်သွားရန် ဟန်ပြင်ပြီးမှ မသွားဖြစ်ဘဲ အိပ်ခန်းထဲဝင်ကာ တံခါးပိတ်လိုက်သည်။ တစ်ယောက်တည်းရှိနေ ကာမှ အထီးကျန်ဆန်မှုက သူ့အပေါ် သိသာစွာ ဖိစီး ကျဆင်းလာသလို ခံစားရ၏။ သွေးတိုးရောဂါဖြင့် အလုပ်မှ ဆေးပင်စင်ယူစဉ်ကာလအထိ တော့ သူ့ဘ၀က လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိခဲ့သည်။ “ရှင် ဒီရောဂါကြီးနဲ့ အလုပ်လုပ်တော့ကော ဒီအိမ်မှာ ငွေဘယ်လောက်ဝင်လာမှာမို့လဲ”၊ သူ့မိန်းမ၏ အသံခပ်စူးစူးက သူ့မျက်နှာပြင် အရေးအကြောင်းတွေပေါ် ဖျတ်ရိုက်သွားသည်။ သည်တုန်းက သူတို့လင်မယား တကျက်ကျက် ပေါ့။ သူတို့ အိမ်ထောင်သက် (၁၈) နှစ်လောက်မှာပင် သူ့မိန်းမ၏ အဖေ၊ (သူ့ယောက္ခထီးကြီး) ဆုံးသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှ ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင် အပါအ၀င် အမွေတွေအတော်များများ ရလိုက်ကြသည်။ အခုတော့လည်း တစ်အိမ်လုံး သည်ရွှေဆိုင်နှင့်ပဲ စားသောက်နေကြသည်။ သူကတော့ အားလုံး ၏ အမြင်မှာ လူပိုသက်သက်။
သူ့လက်ထဲတွင် ဆေးသားရောင်စိုလွင်နေသော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ကိုင်လျက်သာရှိ၏။ ဓာတ်ပုံထဲတွင် မျက်ဝန်းပြာပြာနှင့် ကောင်မ လေးသည် ဘေးတိုက်မကျတကျ အနေအထားမျိုးဖြင့် သူ့ကို ပြုံးပြနေသည်။
““ဒီပုံကို မောင်ယူထားလိုက်တော့… မော့်ကိုလွမ်းရင် ထုတ်ကြည့် နိုင်တာပေါ့””
ကောင်မလေးမျက်နှာက ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေသည်။ မျက်ဝန်းပြာမလေးရယ်… နင်ရဲ့ အဲဒီအပြုအမူလေးတွေကိုပဲ ငါက ချစ်နေမိတာပါ။ သူက ကောင်မလေး၏ဓာတ်ပုံကို ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်အပြာလေးထဲ ညှပ်ကာ လွယ်အိတ်ထဲ အသာအယာထိုးထည့်လိုက် သည်။
““ကိုယ်ပေးမယ့်လက်ဆောင်ကိုတော့ ခါတိုင်းလို ခရစ္စမတ်နေ့ ကျမှပဲ ယူတော့နော်… မော်””
သူ့အပြောကြောင့် ကောင်မလေးခေါင်းကို ဆတ်ခနဲ ညိတ်ပြသည်။ ကြည့်၊ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ငါ့ရဲ့မျက်ဝန်းပြာမလေး…
နှင်းဝတ်နှင်းမှုန်တို့ဖြင့် တလက်လက်လူးပေနေသော ချစ်သူဆံနွယ်ကြားမှာ နှင်းဆီဖြူတစ်ပွင့် ထိုးစိုက်ပေးချင်သည်။ ပိတောက်ပင် နှစ်ဆယ့်သုံး ပင်တန်းစီနေသော ကျောက်ခင်းလမ်း တစ်လျှောက် ငါတို့ လမ်းလျှောက်ကြရအောင်။ လမ်းကြားမှ အမှိုက်ပုံကို ခွေးငါးကောင် တိတိ မွှေနှောက်နေသည်။ နက်မှောင်ပြာရီသော လွမ်းဆွတ်ကြေကွဲတတ်မှုများ မလာပါနှင့်။ မိန်းမပျိုတစ်ယောက်၏ ရယ်သံလိုလို ခပ်ညှင်း ညှင်းတိုက်ခတ်နေသည့် လေပြေသည် မုန်တိုင်း၏ ကနဦးကစ စစ်မောင်းသံဖြစ်ကြောင်း အတော်ကြီးနောက်ကျမှ သိလိုက်ကြရ၏။ အသစ်တဖန် မပိုင်ဆိုင်တော့သော ပါးလျလျအိပ်မက်မြူတို့အား လက်ခုပ်ဖြင့် လိုက်လံဖမ်းဆုပ်ရင်း လေးလံနေသူတစ်ဦးရှိသည်။ ယုံကြည်ရာ အသီးသီးမှာ ရူးသွပ်နေကြသည့်လောက တွင် ဘာတွေကို ယုံကြည်ပစ်လိုက်ရမှာလဲ။ ကဲ… ပြော။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဤကမ္ဘာ၏ နံနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့ သူ့အနေနှင့် တစ်စုံတစ်ခုလောက်တော့ ရူးသွပ်ယုံကြည်ခွင့်ရှိကြောင်း သူ့ကိုယ်သူ ပြောပြနေမိသည်။
လွမ်းဆွတ်ရီဝေစရာကောင်းသော အနမ်းတစ်ချို့အား ပန်းတစ်ခြမ်းဖြင့် ပို့လိုက်ပါ။ ဟောသည်မှာ… ခံတွင်းပျက်လူနာတစ်ယောက် လို ဆို့မှိုင်းမှိုင်းရနံ့ဖြင့် ဘ၀ကိုယ်တိုင် အစားမမှန် အ သောက်မမှန် ဖြစ်နေသည်။
ခရမ်းနုရောင်အသွင် မျှော်လင့်မှုများသည် ထင်ထားသလောက် မလေးနက် မခန့်ထည်ခဲ့ပါ။ အရည်ရွှမ်းမြနေသည့် လိမ္မော်သီး ကလေးများသည် ထင်မှတ်ထားသလောက် မချိုမြိန်ခဲ့ပါ။ နှုတ်ခမ်းသားထွေးထွေးပေါ် ထိတယ်ဆိုရုံလေး နမ်းခဲ့ဖူးသည့် အနမ်းများကလည်း ယုံကြည်ထားသလောက် ရင်ခုန်၍ မနေခဲ့ပါ။ ဆောင်းညကောင်းကင်မှ ကြယ်စုံဖူးများသည်လည်း စိတ်ကူးထားသလောက် လွမ်းဆွတ်ချင်စရာ မကောင်းခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် လွမ်းဆွတ်ရီဝေချင်စရာကောင်းသော အနမ်းတစ်ချို့အား ပန်းတစ်ခြင်းဖြင့် ထပ်ပြီး ပို့ပေးလိုက်ပါ။
နံနက်ခင်းသည် ဖြူရော်ရော်နှင်းခိုးငွေ့များကြား ကကြိုးသစ်ကို ဆင်ယင်နေပြီ။ ရေခဲငွေ့သီးသော စကားသံများဖြင့် ကမ္ဘာမြေသည် ရှင်သန်နိုးထ လူးလွန့်စပြုခဲ့ပြီ။ သည်နေ့ ခရစ္စမတ် နေ့။
သူက ထိုင်နေကျလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပင် ထိုင်နေသည်။ သူ့ လက်ထဲတွင် ဟောင်းမြေ့နေသည့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့် အတန်ငယ် ၀ါရော်စပြုနေသော ခရစ္စမတ်ကဒ်လေးတစ်ခုကို ကိုင် ဆောင်ထားသည်။ ထိုအရာဝတ္ထုလေးနှစ်ခုအား သူ့လက်ဖျားများဖြင့် (ယခုပင် ပျောက်ပျက်သွားတော့မည့်အလား) မကြာခဏ ပွတ်သပ်ထိစမ်းနေပြန်သည်။ သူ့ခေါင်းပေါ်မှ ဆံပင်များ သည်လည်း အဖြူရောင်ကျိုးတိုးကျဲတဲ ရှိနေ ခဲ့ပြီ။ ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ သူ့မိန်းမ (ဒေါ်) ၀င်းဝင်းမော်သည် သူမမြင်ဖူးသော အပြုံးမျိုးဖြင့် သူ့ကိုပြုံးပြနေလေသည်။
သူက ပီကေတစ်ခု၏ ချိုမြိန်သော ကာလများအား ရူးသွပ်ယုံကြည်မိလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ကိစ္စပြီးတော့ ဒေစီနဲ့ အခါတိုင်းလိုပဲ စကားပြောဖြစ်ကြတယ် တကယ့်ကို နွေးထွေးချိုမြိန်ထူးကဲတဲ့ အခိုက်အတန့်ကလေးပါပဲ ကိစ္စမပြီးခင်တုန်းက ဒေစီအော်သလို လေသံမျိုးနဲ့ သူလိုက် အော်ပြတော့ အိပ်ယာတစ်ဖက်ကို ဒေစီရှက်ပြီး လှည့်သွားတယ် ဒါပေမယ့်ခဏနေတော့ ဒေစီတဟင်းဟင်းရယ်ရင်း သူ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို လာပွတ်ပြန်တယ် ပေါင်တွင်းသားတွေ ပေါ်က ဒေစီ့လက်ချောင်းလေးတွေရဲ့ နူးညံ့မှုကို သူရနေတယ် သူ့မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ပြီး ငြိမ်ခံနေလိုက်တယ် အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ ပေါင်ပေါ်မှာ စူးခနဲဖြစ်သွားလို့ သူလန့်သွားတယ် မှိတ် ထားတဲ့ မျက်လုံးတွေကို ကမန်းကတန်းဖွင့်ကြည့်တော့ ဒေစီက ဘောပင်တစ်ချောင်းနဲ့ ပေါင်ပေါ်မှာ အရုပ်ဆွဲနေတာ အလစ်မို့ သူခံလိုက်ရတယ် ဘာတွေ လျှောက်ဆွဲနေတာလဲလို့ ဒေစီ့ ကို ခပ်တိုးတိုးလှမ်းမေးလိုက်တယ် တက်တူးဆွဲနေတာ ငြိမ်ငြိမ်နေလို့ ထုံးစံအတိုင်း ဒေစီက ညစ်ကျယ်ကျယ် ပြန်ဖြေတယ် ကိုယ်က တက်တူးဆို အရမ်းမုန်းတာလို့ သူထပ်ပြောလိုက် တယ် ငြိမ်ငြိမ်နေလို့ ပြောနေတယ်နော်လို့ ဒေစီအော်ရင်း ပေါင်ပေါ်မှာ စူးခနဲ နာသွားတယ် ဒေစီတမင်ညစ်နေပြီမှန်းသိတော့ သူဘာမှ ဆက်မပြောဖြစ်တော့ဘူး အဲဒီ့အစား မျက်လုံးတွေ ကိုပဲ နောက်တစ်ခါပြန်မှိတ်လိုက်တယ် နည်းနည်းကြာသွားတော့ ပြီးပြီ ဒေစီဆွဲထားတဲ့ တက်တူး စောက်ရမ်းလန်းတယ်ဆိုပြီး ခပ်ဆာဆာအသံမျိုးလေးနဲ့ ဒေစီလုပ်ပြောတယ် ကိစ္စပြီး တိုင်း ဒေစီဆီ့က အဲဒီလိုအသံမျိုးလေးတွေ မကြာခဏကြားနေကျပဲ သူကြည့်မလို့ မျက်လုံးတွေဖွင့်ပြီး ခါးမတ်ဟန်ပြင်တယ် နေဦး မကြည့်နဲ့ နောက်မှကြည့်လို့ ဒေစီက ဇွတ်ပြောရင်း သူ့ ကို အိပ်ယာပေါ်ပြန်လှဲချတယ် ဒေစီမှားနေပြီ တက်တူးဆိုတာ ဆွဲရတာမဟုတ်ဘူး ထိုးရတာလို့ မကျေနပ်တဲ့လေသံနဲ့ သူပြန်ပြောတုန်းတန်းလန်း အိပ်ယာခင်းပေါ် ပြန်လဲကျသွားတယ် သူ့စကားကို ဒေစီက ဘာမှ စောဒက မတက်ဘူး နောက်မှ ကြည့်လို့ပဲ ထပ်ပြောတယ် ဒါပေမယ့်လို့ နောက်တော့ သူဒီအကြောင်းကို လုံးလုံးမေ့သွားတယ် မေ့သွားတာမှ အိမ်က လေဒီ မာဂရက်ကြီးနဲ့ ကိစ္စဖြစ်ခါနီးလေးမှ ဖျပ်ခနဲ သွားသတိရတော့တာပဲ အိုး နိုး အအေးလှိုင်းဖြတ်သလား ဘာလားမသိ ဒီရက်တွေ သိပ်အေးလွန်းလို့ ရေတောင် သူမချိုးဖြစ်။ ။